12kw-300kw ရီကာဒိုအင်ဂျင် Generator ကို ပေးသွင်း,ထုတ်လုပ်သူ - Fmwpower.com
ရီကာဒိုမီးစက်တစ်စုံ ရီကာဒိုစီးရီးဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း FMW ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ brushless AC အမီးစက် module တွေ။
ပါဝါစ Range: 300kw မှ 12kw
Weifang အားရီကာဒို Generator ကို ၏နည်းပညာဖြင့်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်တီထွင်နေသည် ဗြိတိန်ကနေမူရင်းရီကာဒိုအင်ဂျင်ကို။ K နှင့် R ကိုစီးရီး၏ဤမျိုး ဒီဇယ်မီးစက် ပိုပြီးအားဖြင့်ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ် နှစ်ပေါင်း 100 အဆက်မပြတ်သမိုင်းထက်နှင့် ရီကာဒို မီးစက်တစ်စုံ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အလွန်အပြိုင်အဆိုင်နှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုအများကြီးဆွဲဆောင် စျေးနှုန်း (နီးပါး ဈေးအပေါဆုံးမီးစက် ) နှင့်မျှမျှတတယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်။ FMW ပါဝါသာတချို့ထင်ရှားတဲ့ရီကာဒိုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် အင်ဂျင်စက်ရုံများအမြဲစံမနှမြောသုံးပါနှင့်လည်းတင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းသောသူတို့အား EX-အလုပ်မှာမတိုင်မီအင်ဂျင်။ ၏တနျခိုးအကွာအဝေး ရီကာဒို genset နေ 12kw အထိ 300kw ။
1. ရီကာဒိုအင်ဂျင် Generator ကိုပင်မ Specification
2. ရီကာဒို Generator ကို Se t ကို
အသံတိတ်ဒီဇယ်မီးစက် Ricardo ဒီဇယ်မီးစက် Ricardo Ricardo မီးစက်တစ်စုံ Ricardo Generating set ကို Ricardo အင်ဂျင်မီးစက် အသံတိတ်မီးစက် Ricardo
နောက်တစ်ခု : 24kw-1800kw တတ်အင်ဂျင် Generator ကို
ဘာသာရပ် : 12kw-300kw ရီကာဒိုအင်ဂျင် Generator ကို
Kubota မီးစက်တစ်စုံ Kubota ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း Stamford ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp နှင့်အတူမီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless မီးစက် သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။ ပါဝါစ Range: 30kw မှ 6kw ပွင့်လင်း Frame က Generator ကိုထိုမြတ်သောအမျိုးအစား Generator ကိုနှစ်ဦးစလုံး